Knowledge – A one
အေရးႀကီးတာေလး တခု ေျပာရေအာင္။ မေန႔ညက အင္တာနက္ ျဖတ္တာသည္ မိုဘိုင္း ေအာ္ပေရတာ ေတြမွာ tracking စက္ လိုက္တပ္ဆင္တာ ေျပာတယ္။ဒီသတင္းသည္ တုတု စစ္စစ္
Knowledge February 16, 2021 February 27, 2021 No Comment
Tor Browser for Android is the only official mobile browser supported by the Tor Project,
Knowledge February 14, 2021 February 24, 2021 No Comment
FACEBOOK သုံးဖို့အတွက် VPN သုံးရင် ဒီအချက်တွေကို မဖြစ်မနေသိထား
Facebook သုံးဖို့အတွက် VPN သုံးရင် ဒီအချက်တွေကို မဖြစ်မနေသိထား မြန်မာမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် ဖေ့စ်ဘုတ်လူမှုကွန်ရက်ကို ပိတ်ဆို့မှုခံထားရပြီး VPN လို့ခေါ်တဲ့ Virtual Private Network
Knowledge February 13, 2021 February 16, 2021 No Comment
အင်တာနက်ကြီး ပြန်ပိတ်သွားရင်တောင် FACEBOOK နဲ့တခြားAPP တွေပါဆက်သုံးလို့ရတဲ့နည်းTEST SUCCEEDED!! (စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီး)
အင်တာနက်ကြီး ပြန်ပိတ်သွားရင်တောင် Facebook နဲ့တခြားapp တွေပါဆက်သုံးလို့ရတဲ့နည်း………..Test Succeeded!! (စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီး) Test Succeeded!! (စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီး) Internet ပြန်ပိတ်သွားရင်တောင် Facebook အပါအဝင်တခြားappတွေပါဆက်သုံးလို့ရတဲ့နည်း။ Speedify
Knowledge February 13, 2021 February 23, 2021 No Comment
၂၀၂၁ မှာ တစ်ကြော့ပြန်ခေတ်စားလာတဲ့ မင်နီတက်တူး
တက်တူးလို့ပြောလိုက်ရင် များသောအားဖြင့် အနက်ရောင်မင်နဲ့ရေးထိုးကြတဲ့ တက်တူးပုံတွေကများပါတယ်။ သင်ဟာ သူများနဲ့မတူတဲ့ ထူးခြားတဲ့ တက်တူးပုံတစ်ခုထိုးဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေ့ပြောပြမယ့် မင်နီတက်တူးတွေက ကွက်တိဖြစ်စေမှာပါ။ မင်နီတက်တူးဆိုတာ အနီရောင်မင်တစ်မျိုးတည်းကို အသုံးပြုပြီး
Knowledge February 1, 2021 February 1, 2021 No Comment
ဟိုဒင်းဟိုဟာ မပြုဘဲ ခေတ်မီနည်းပညာဖြင့် ကလေးယူမည့် တခု့လတ်အဆိုတော်ရေဗက္ကာဝင်း
၂၀၁၀နှစ်အစောပိုင်းကာလတွေတုန်းက ရေဗက္ကာဝင်းဆိုတာ ဟုန်းဟုန်းတောက်တောက် ကျော်ကြား နေတဲ့ အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်တစ်ဦး ဆိုလဲ မမှားပါဘူး အချစ်ဆုံးမို့ပြောပြချင်ပါတယ် မေ့နှလုံးသားနင်းရသူမောင်ရယ် အမြတ်နိုးဆုံးပါပဲကွယ် ကြားတာ နဲ့ မသိသူမရှိ လိုက်မဆိုနိုင်တဲ့သူ
Knowledge February 1, 2021 No Comment
အတွေးလွန်ခြင်းကို အနိုင်ယူဖို့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းများ
အေတြးလြန္ျခင္းဆိုတာ သင့္ကိုအခ်ိန္တိုင္း စိတ္ဒူကၡေပးေနတဲ့ အနီးကပ္ရန္သူပါ။ အေတြးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြမွာ ထိခိုက္ေစႏိုင္သလို အသက္အႏၲရာယ္ကို သက္ေရာက္မႈရွိေစတဲ့အထိ ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ဒီေဆာင္းပါးေလးကိုဖတ္ေနတဲ့ သင္ဟာ ကိစၥတိုင္းကို အေတြးလြန္ၿပီး
Knowledge January 31, 2021 No Comment
အသက်၃၀ အရွယ်မှာ စတင်ရမယ့် အရာများ (မဖြစ်မနေ ဖတ်ကြည့် လိုက်ပါနော်)
အသက် ၃၀+ ဆိုတာ ဘဝရဲ့ငါးပုံ နှစ်ပုံခန့်ကို ဖြတ်သန်းပြီးစ အရွယ်ဖြစ် ပါတယ် ။ နုပျိုမှုနဲ့ဘဝ အတွေ့အကြုံ ဉာဏ်ပညာ ရင့်ကျက်မှု သမမျှတ တဲ့
Knowledge January 27, 2021 January 29, 2021 No Comment
မိတ်ဆွေတို့ သိပ်မသိသေးတဲ့မီးသွေးမှုန့်ရဲ့ အံ့မခန်းအသုံးဝင်ပုံ (၇) မျိုး
မီးသွေးမှုန့် ဟာ အရှေ့တိုင်းမှာရော အနောက်တိုင်းမှာပါ ဆေးပညာ၊ ကျန်းမာရေး၊ အလှအပရေးရာတွေမှာ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာတာ ကြာလှပါပြီနော်။ အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ မီးသွေးမှုန့်ကို နေ့စဉ် ဘဝ မှာ
တစ္ကယ္အျဖစ္ပ်က္ေလးပါ ဖာေခါင္းမ်ားသို႔ေပးစာ ယခုေခတ္ လူငယ္ က်ား/မ မေရြး ၿပီးဆုံးေအာင္ဖတ္ေပးၾက​ေစလိုပါတယ္​​ေနာ္​. a´ ” ေဟ်ာင့္ ငါ့ေစာ္ဆီကအေျဖရၿပီကြ “b´ ” ဟုတ္လား ”
Knowledge January 12, 2021 January 14, 2021 No Comment